Ataovy manara-dalàna • AoRaha
Tsy ifandrenesana indray ny tanàna. Mbola haharitra iray volana ny godogodona etsy, tabataba eroa. Miranty soratra samihafa, na trano na fiara, na izay toerana malalaka rehetra azo ametrahana an’ireny afisy manao pi-maso an-dRanona sy Ranona mba hifidy ny kandidà laharana izao sy izao ireny. Fotoanany moa izao. Hampielezana hevitra. Hampandany an’izay ho filoham-pirenena manaraka ireo mpifidy resy lahatra sy ireo mbola vonon-kifidy ary ireo be fanantenana fa mety hisy ihany ny fahagagana.
Na izany aza, tokony hisy fifanajana ihany manodidina ny hetsika isan-karazany amin’izao propagandy izao. Na nomena alalana aza mantsy ve, dia tsy maninona na hibahana arabe na hanohintohina ny fahalalahan’ny hafa aza ny zavatra ataon’ny ekipan’ny kandidà sasany. Eto amin’ity renivohitra efa tototra (tena ara-bakiteny) sy tsentsina ity ve dia mbola hijanona etsy sy eroa ihany. Manjary vao mainka manome fahasorenana, ary mety ho fankahalana ho anareo kandidà mihitsy aza, ny tsy fanajana ny hafa. Saino ihany satria ho maodelin’ny fomba hitantananareo ny firenena ianareo kandidà mihevitra ny ho lany eo.
Araka ny tenin’ireo olon-kendry, na dia mbola tsy nanomboka aza ny fampielezan-kevitra, fa raha tsy mbola eo amin’ny seza fiandrianana akory ianareo no efa manao ny tsy ara-dalàna sahady, dia inona no andrasana aminareo? Mitombina izany na eo amin’ny fitsipi-pitondran-tenan’ireo kandidà mandritra ny fanehoan-keviny sy ny famelabelarany ny fandaharanasany manoloana ny vahoaka aza.
Angamba, tsy hisy fialan-tsiny azo atao raha ny fanalam-baràka, fanaratsiana mbamin’ny fanosoram-potaka ny hafa no hoentina handresy lahatra ny mpifidy. Tsy voatery ho dina na sata na lalàna vao afaka hifehy tena ireo kandidà ireo. Na amin’ny maha olona fotsiny aza. Na amin’ny fihavanana nolalaina teo amin’ny fiaraha-monina malagasy fotsiny aza. Saingy tany repoblikanina isika, misy lalàna mipetraka, ary natao hohajain’ny rehetra. Manomboka aminareo heverina fa ho Raiamandrenin’ny firenena atsy ho atsy izany fifanajana sy fanehoana fanajana eo imasom-bahoaka izany.
Dia ity ihany koa misy resaka iray: efa nanokanana toerana ho an’ireo peta-drindrina ianareo kandidà tsirairay avy, koa aza lotoina ny tranon’olon-tsotra tsy nifanaraka taminareo. Mba jereo ihany koa ny manodidina sao eny akaikin’ny hôpitaly na toeram-pitsaboana no handeha hiantsoantso hampiakatra tosi-dra ny marary. Indrindra fa maro loatra ianareo enina amby telopolo mianadahy mianaka, sao sanatria ilay kandidà tena halan’ny sasany no hampihombo ny aretin’olona. Toa misimisy ihany mantsy ianareo no halam-bahoaka ao.
Fanodikodinam-bola sy kolikoly Hohadihadian’ny IGE hatreny amin’ ireo rantsamangaikan’ny Jirama
Fandravana voka-pifidianana Naharay fitoriana dimampolo amby zato ny Filankevi-panjakana
FANOHERANA FIFIDIANANA :: Fampielezan-kevitra hafa kely ny an’ireo solontenan’ny kandidà roa amby roapolo
Pilo Kely aroson’i Mamy
Tranga any Faratsiho Mpianatra fito vavy voan’ny aretina hafahafa
Tsatok’antsy teny Anosibe Lehilahy namono ny vadiny sy nandratra olona telo
Famonjena nitera-doza Tsy voasakam-badiny tamindRafahafatesana ity raim-pianakaviana